China Iron oxide nhema 722/750 vagadziri uye vanotengesa | Shencai Rangi
Chrome oxide girini
Iron oxide nhema 722/750
Ferrosoferric oxide, Chemical Formula Fe 3 O 4. Inowanzozivikanwa se iron oxide nhema, makristasi matema ane magnetic, inozivikanwawo seinonzi iron iron oxide. Chinhu chacho chinonyungudika muacid solution, isingasviki mumvura, Alkali Solution uye organic solvents senge ethanol uye ether. Natural ferrosoferric oxide haina insoluble mune acid mhinduro uye nyore nyore oxidize kune iron (III) oxide mumhepo mune yakanyorova mamiriro.
1. Ferrosoferric oxide ndiyo inowanzoshandiswa magineti zvinhu. Kunyanya kugadzirwa yakachena ferrosoferric oxide inoshandiswa senge mbishi zvigadzirwa zvekurekodha matepi uye nharembozha michina. Natural magnetite ndiyo mbishi yekugadzira simbi.
Yaishandiswa kugadzira ma primers ne topcoats.
Iyo yakaoma kwazvo uye inogona kushandiswa seyakaomarara. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mumunda wekumisikidza mota, senge: Brake mapedhi, akamedura shangu uye zvichingodaro.
Ferrosoferric oxide yakave ichizivikanwa mumunda wezvinhu zvekusvira muChina, ye electrode, kugadzirwa kwetambo kuchiri muchikamu chekutanga, tarisiro yemusika yakafara kwazvo.
Ferrosoferric oxide inogona zvakare kushandiswa seye pigments uye polishes. 3. Chigadzirwa Kurongedza:
25 makirogiramu / raanoziva bhegi bhegi, 25MT / 20FCL (Iron oxide Tsvuku);
25 makirogiramu / raanoziva bepa bhegi, 12-14MT / 20'FCL (Iron oxide Yero);
25 makirogiramu / raanoziva bepa bhegi, 25MT / 20'FCL (Iron oxide Nhema)
25 makirogiramu / raanoziva bepa bhegi, 25MT / 20'FCL (Iron oxide girini)
25 makirogiramu / raanoziva bepa, 25MT / 20'FCL (Iron oxide bhuruu)
25 makirogiramu / raanoziva bepa, 25MT / 20'FCL (Iron oxide Brown)
25 makirogiramu / raanoziva bepa bhegi, 25MT / 20'FCL (Iron oxide orenji)
1.bvuma kuongororwa kweSGS, CCIC uye rimwe dhipatimendi rekuongorora repasi rese.
2.Free samples ichatumirwa kwauri.
3.14 makore ruzivo.
SENMING ferric oxide inorganic color pigments, iron oxide red pigment inotengeswa pasi pechigadzirwa zvigadzirwa "SHENMING" inowanikwa muRed, Tsvuku, Dema, Girinhi, Bhuruu, orenji, Bhuruu.
"SHENMING" brand synthetic powder pigment iron oxide nhema 722 inofarira mukurumbira wemusika uye zvigadzirwa zvinotengeswa mushe mushe.
CCIC, CIQ, BV, kuongororwa kweGSS kunogamuchirwa, pamwe neyemahara sevhisi sevhisi.
Mumakore achangopfuura, iyo yekuendesa kunze kwenyika kuSoutheast Asia, Middle East, South Asia, South America, Africa, Russia neSouth Korea iri kukura uye chigadzirwa chigadzirwa uye mukurumbira zvakagamuchirwa zvakafanana kurumbidzwa kwepamusoro.
Kana iwe uchifarira kutenga mhando yepamusoro yehupfu pigment iron oxide nhema 722 kubva kuChina, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FEKI ndiyo yako sarudzo yakanaka.
Isu tine 17years ruzivo mune pigments.We takagadzirira kukupa iwe mhando yepamusoro, basa rakanakisa.
Zita Rekutengesa DZIVA OXIDE DEMA
Dhirivhari fomu Upfu
Ruvara indekisi Nguruve nhema 11 (77499)
CAS Kwete/EC Nha. 1317-61-9 / 215-277-5
Magadzirirwo Zviri Mukati (Fe3O4) % 95
Mafuta ekumwa Rine mamiririta / 100g 15 ~ 25
Res. Pane 325 mesh % .50.5
Mvura yakasviba munyu % .50.5
unyoro % .01.0
pH kukosha 5 ~ 8
Chaicho giravhiti g / cm3 4.6
Tinting simba (zvichienzaniswa neyese) % 95 ~ 105
Ruvara mutsauko ∆E (uchienzaniswa neyakajairwa) .01.0
Kutengesa kurongedza Mune 25kg bhegi / 1000kg hombe bhegi ipapo palletized
Kutakura & kuchengetedza Dzivirira pakurwisa mamiriro ekunze / kuchitoro munzvimbo yakaoma
Kudzivirirwa Chigadzirwa hachina kusarudzwa sengozi kune EC 1907/2006 & EC 1272/2008
Pashure: iron oxide yero 311/313/920
Zvadaro: Iron oxide girini 5605/835
iron oxide yero 311/313/920
iron oxide tsvuku 110/120/130/180/190
Iron oxide orenji 960
Iron oxide shava 600/610/663/686
Iron oxide yebhuruu
Iron oxide grey